Imtixaanka New isticmaala dhibic keliya oo dhiig u muujiyo taariikhda oo dhan cudurada viral - Rule News
Imtixaanka New isticmaala dhibic keliya oo dhiig u muujiyo taariikhda oo dhan cudurada viral
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Imtixaanka New isticmaala dhibic keliya oo dhiig u muujiyo taariikhda oo dhan cudurada viral” waxaa qoray Sample editor Science Ian, for The Guardian on Thursday 4-tii Juunyo 2015 18.00 UTC
Cilmi ayaa soo saartay baaritaanka raqiis ah oo degdeg ah in Shaaciyay qof ee taariikhda buuxda ee cudurada viral dhibic kaliya oo dhiig ah.
Baaritaanku wuxuu kuu oggolaanayaa in dhakhaatiirta inay akhriyaan baxay liiska fayrusyada in cudurka, ama ay sii wadaan inay qaadsiiyaan, bukaanada xitaa marka iyagu ma ay sababtay wax calaamado cad.
Technology la micno ah in GP-baari kartaa in isbitaalkan dhammaan fayrusyada ah oo awood u leh cudurka dadka. Waxa loo gudbin ogaanshaha ee cudurada halista ah sida hepatitis C iyo HIV, Dadka oo qaadi karaan muddo sanado ah aan ogayn.
"Sida caadiga ah, marka dhakhtar doonayo in uu ogaado haddii uu ku dhaco qof qaba fayraska ah, ay u leeyihiin in ay u maleynayaa in waxa uu fayrasku yahay, ka dibna si gaar ah u raadiyaan virus in,"Ayuu yiri Stephen Elledge, oo horkacayey Mashruucan ayaa Isbitaalka Brigham iyo haweenka ee Boston.
"Tani waxay keeni kartaa in cudur-aqoonsiga ay dadka sannad kasta ha u tageen Takhtarkaaga u tag oo taariikhdooda viral duubay. Waxaa hubaal ah ogaan kari lahaa cudurada viral in ay ka dhab tahay iyo in bukaan ayan aqoon lahaa,"Ayuu yiri.
The (£ 16) imtixaanka barbaro on horumarka bayoolaji synthetic iyo horumarintooda hiddo deg deg ah si ay u falanqeeyaan ka badan 1000 nooc ka mid ah fayrasyada aadanaha mid ka mid pass. Ilaa iyo hadda, baaritaan ugu ayaa sugayay oo kaliya virus hal mar ah. Elledge ku qiyaastay in baaritaan ugu dambeeyey, loo yaqaan VirScan, karto 100 shay-baarka in laba ilaa saddex maalmood.
Related: WHO oo ansixiyay imtixaanka 15-daqiiqo ah ee Ebola
Baaritaanku wuxuu xawilaadda xaqiiqada ah in habka difaaca jirka ka dhigaysa antibodies si ay ula dagaalamaan fayrusyada mar kasta oo jidhka ah cudurka. Waxay unugyadaas ku noolaan karaa in dhiigga sanado iyo xataa tobanaan sano.
In la horumariyo imtixaanka, Elledge oo ka danbeeyay guuto oo fayrusyada aan dhib lahayn in googooyo borotiinada qaado ka fayrusyada aadanaha on meelaha ay. Guud ahaan, ay in ka badan qaadeen borotiinada 1000 nooc oo ka mid ah 206 noocyada kala duwan ee fayraska loo yaqaan inay qaadsiiyaan dadka. Difaaca isticmaali jajabkii protein, kuwaas oo ah in la aqoonsado duuleen fayrusyada iyo weeraro ay.
Markii qoyaanka ah dhiig ka bukaan ahaan waxaa ku qasmay ah fayrasyada modified, wax antibodies ay leeyihiin qabsado on in borotiinada virus aadanaha ay aqoonsadaan sida duulay. Saynisyahano ayaa markaas u soo bixi antibodies oo la aqoonsado fayrusyada aadanaha ka jajabkii protein xajiyaa ay u.
"Waa markii ugu horeysay ee aan awoodin in ay eegto hab buuxda u eex waxa fayrusyada yihiin dadka cudurka, oo annaguna waannu samayn kartaa dhammaan fayrusyada yaqaan,"Ayuu yiri Elledge. Baaritaanku wuxuu diiro antibodies uu qofku u soo saarta laga talaalo, Laakiinse kuwanu waxay la tuuraa karaa natiijada imtixaanka. Faahfaahinta waxaa soo weriyey ee Science.
In dibad of technology ah, kooxda falanqeeyay dhiig ka 569 qof oo ku nool Maraykanka, Koonfur Afrika, Thailand iyo Peru. Baaritaanka waxaa lagu ogaaday in, celcelis, ayaa lagu qaadsiiyay dadka 10 nooc oo fayrusyada, inkasta oo ugu yaraan laba qof oo maxkamadda la lahaa taariikhdii 84 cudurada ka noocyada kala duwan ee fayraska.
Infekshannada ugu badan ahaayeen fayrusyada herpes, taas oo keeni xanuun hergeb, enteroviruses in la laayo stomaches, influenza, iyo rhinoviruses in ay kiciyaan oo caadi ah hargab. Kuwa dalka Maraykanka ayaa soo maray cudurada ka yar kuwa dalalka kale, oo sida la filayo, dadka waayeelka ah lahaa taariikh viral taajirsan yahay ciyaartoyda da'da yar.
Baaritaanku wuxuu keeni ku saabsan faa'iidooyinka ugu waaweyn ee dadka bukaanka ah xubin. Mid ka mid ah dhibaato in la raaci karaan qaliin transplant waa la filayn reawakening ka mid ah fayrasyada in ay lurked aan firfircooneyn ee bukaan-socodka ama deeq sannado. Fayrusyada Kuwani ku noqon karaa in ciidanka marka nidaamka difaaca jirka bukaanka la xakameeyo daawooyinka si looga hortago in uu diiday hay'adda. Baaritaano Standard inta badan soo qaado fayrusyada qarsoon qalliinka ka hor ku guul darreysato, laakiin habka VirScan Muujin laga yaabaa in joogitaanka iyo heegan dhakhaatiirta iyo bukaanka ay u khatar ah.
"Tani waxay noqon kartaa mid aad u qiimo badan,"Said Iwijn De Vlaminck, Injineer ah oo Biomedical at University Cornell ee New York, oo aan lug ku lahayn daraasaddan. "Maxay waxan kuu oggolaanayaa in aad samayn la fiiriyo ee la soo dhaafay iyo cabbiro gaadhista qofku in uu ku cudurada hore. Taasi waxay leedahay faa'iidooyin muhiim ah, maxaa yeelay, waxaad ogaan kartaa infekshannada in ay tagaan Telcom. Waxaad baari kara dhiig ka bukaanka iyo deeq xubin jidh in this hab aad u ballaaran oo la saadaaliyo arrimaha kara mustaqbalka la reactivation viral. "
Qubarada imtixaanka sidoo kale cudurada viral sida gaar ah xoori doonaa iftiin kudhacaan karaa dadka u muuqda in cudurada la xidhiidhin dambe ee nolosha. Qaar ka mid ah cudurada waxyeello u keeni karaa si joogto ah unugyada jidhka, ama bedelo habka difaaca jirka, siyaabo in ka tago dad badan oo halis ugu ah dhibaatooyinka caafimaad markay waynaadaan. Tusaale ahaan, cudurka uu keeno fayraska Epstein-Barr kor u qaadi kara halista ah ee kansarka. Laakiin sida kale fayrusyada saamayn caafimaad oo muddo dheer ka fog yahay murkier. "Wax ka falanqaynta waa wax this runtii suurtagalinaysaa,"Ayuu yiri Elledge.
Police ka heli qaybo qoriga 3D ee Manchester
Amazon oo bilaabay ciyaaraha iyo 4K Streaming Dabka TV up ...
Top 3 Studies Taasi dhawaaqay Wax Aad Odd
17430	0 Aids iyo HIV, Qodobka, Kiimikada noole iyo biology kelli, Biology, Hepatitis C, Ian Sample, immunology, qaybta Main, cilmi Medical, Science, The Guardian-ka, news UK
← Sidee indhahaaga gacangelin fikirkaaga Ugu sareysa afar killers casriga ah ee galbeedka →